Nhau - Goridhe Laser muChina International Smart Factory Exhibition
Pipe & Tube Laser Kutema Muchina
Metal Sheet Laser Kutema Muchina
Metal Plate Uye Tube Laser Kutema Muchina
Robotic Arm 3D Laser Kutema Uye Welding Machine
Metal & Isina-simbi Laser Kucheka Muchina
Nemazvo Fiber Laser Kucheka Machine
Yakazara otomatiki Pipe Fiber Laser Kucheka Muchina P- (A) Series
Yakazara Yakavharwa Fiber Laser Kucheka Muchina Nenhovo Shanduko Tafura GF-JH Series
Vhura Type Fibre Laser Kutema Muchina GF Series
Dual Rinoshanda Fiber Laser Sheet & Tube Kucheka Muchina GF-T Series
Yakakwira Precision Linear mota Fibre Laser Kutema Muchina-GF-6060
Goridhe Laser muChina International Smart Factory Exhibition
Golden Laser somunhu aitungamirira Laser michina manufactory mu China akafara kupinda muna 6 China (Ningbo) International Smart Factory Exhibition uye rechi17 China Mould Capital Expo (Ningbo Machine Chishandiswa & Mould Exhibition).
Ningbo International Robotics, Intelligent Processing uye Industrial Automation Exhibition (ChinaMach) yakatangwa muna 2000 uye yakadzika midzi muChina yekugadzira. Icho chiitiko chikuru chemuchina chishandiso nemidziyo indasitiri inozivikanwa uye inotsigirwa ne Ministry of Commerce uye Ningbo Municipal People's Government. Vagadziri mutengi boka muYangtze Rwizi Delta mudunhu reChina ndiyo sarudzo yakanakisa yemuchina chishandiso michina, otomatiki, akangwara kugadzira, uye vagadziri vemarobhoti ekuwedzera musika muNingbo, Zhejiang uye neYangtze Rwizi Delta mudunhu reChina. Izvo zvakabatana zvakarongedzwa neChina Machinery Engineering Co, Ltd. uye Yazhuo Exhibition Service Co, Ltd. Iyo Ningbo Machine Chishandiso Equipment Chiratidziro chichaitwa panguva imwe chete.
Razova rakakurumbira repamba robhoti, rakangwara kugadzira uye maindasitiri kushandisa michina yekuratidzira chiratidzo, uye rave richirumbidzwa nevazhinji nemabhizinesi.
Goridhe Laser inoda kuenderera pamwe nerutsva nyowani yekuvandudza kwemaindasitiri uye kumhanya kwekukura kwemaindasitiri ari kubuda, inoshandisa iyo Yakagadzirwa muChina 2025 zano, inosanganisa uye inoongorora zvido zvitsva, uye inogadzira mikana mitsva yemusika.
Ticharatidza matatu seti e fiber laser yekucheka michina:
1: Zvizere Zvoga Zvidiki Fibre Laser Tube Kucheka Muchina P1260A
● P1260A diki simbi chubhu yekucheka muchina inoitirwa diki dhayamita machubhu (20mm-120mm).
● Yakakwana dhizaini, kuchengetedza mari yekufambisa uye kugadzirisa mashandisirwo enzvimbo yefekitori.
● Yakagadzirirwa ne-ultra-high-speed chuck uye inogadzirisa nzira yekudyisa, inogona kuona kushandiswa kwekugadzira nekuvandudza kushanda kwekugadzira.
2: Yakazara Laser Tube Kucheka Muchina P2060B
● Zviri nyore kushanda, yakasarudzika yekuisa-yemahara dhizaini, inoratidzwa neiri-ye-bhokisi sevhisi.
● Inodhura zviri nyore kuwana mari, iyi laser chubhu yekucheka inogona kusangana nemhando dzakasiyana dzekugadzira pombi. Mhando yekucheka pombi dhayamita kubva 20mm kusvika 200mm.
3: Ultral-yakakwira Simba 12000w Fiber Laser Kucheka Muchina GF-1530JH yesimbi yekucheka sheet
● Simba rekucheka laser, inokwanisa kukwanisa kutema mahwendefa esimbi akakora kusvika 60mm.
● Yakadzika-yekumanikidza mweya yekucheka tekinoroji. Mhepo yekucheka kumhanya yakapetwa katatu okisijeni yekumhanyisa kumhanya, iyo yakazara simba rekushandisa inoderedzwa ne50%, uye mutengo wekushandisa wakaderera.
● Kunyatsoita. Iyo slag inogadzirwa panguva yekuboora inobviswa kusvika padanho rakakura, uye iyo yekucheka mupendero inotsvedza uye yakakwana.
● China Laser sosi uye inoshamwaridzika Hypcut controller iri nyore kuitisa uye nemutengo wemakwikwi mumusika.
Wakamirira chii? Ngatiendei kuratidzwa uye tarisa mhando yemuchina.
Yako nyanzvi fiber laser yekucheka muchina vagadziri muChina, vanoteerera kune ako pfungwa, ongorora yako simbi yekucheka uye simbi yekunamatira zvinodiwa, kunatsiridza yako kugadzirwa kushanda. Titumirei kubvunza kwako, isu tichakupa iwe inokwanisika fiber laser yekucheka muchina mhinduro kune yako ruzivo indasitiri.